Ukuphononongwa 'kweNyoni ePhakamileyo': I-Soderbergh Ikhanyisa ukukhanya kwi-NBA yesithunzi - Iimuvi
'Intaka ePhakamileyo' yiMovie malunga neShishini leBhola yeBhola yeBhola kunye neShishini leMovie
Babeka umdlalo phezulu komdlalo, utshilo umqeqeshi webhola yomnyazi kwangethuba Intaka ephaphazela phezulu. Ngumgca olungileyo, kuba Idrama entsha kaSteven Soderbergh-ebhalwe ngu-Oscar-winning Ukukhanya kwenyanga umbhali uTarell Alvin McCraney-yifilimu engaphezulu kwemuvi. Ngokucacileyo, ifilimu ibalisa ibali likaRay, iarhente yezemidlalo yaseManhattan enobuqili, ezama ukukhusela umxhasi wakhe weenkwenkwezi ngexesha lokuvalwa kwe-NBA. Kwindawo yokuvula, uRay ufundisa u-Erick Scott (uMelvin Gregg) malunga nokubaluleka kokubukela imali yakhe. Ubuya umva-na-phambili, bedlalelwa etafileni kwindawo yokutyela ye-deluxe, ifanekisela ibali apho iimbaleki kunye nezoqoqosho zidibana khona kuzo zonke iindawo ezinokubakho. Kamva, xa uRay ecebisa ukuba u-Erick kunye neqela lakhe le-All-Star-iqela-slash-imbangi uJamero (uJustin Hurtt-Dunkley) basasaza umdlalo omnye-on-one ngqo kubabukeli behlabathi, i-basketball-jonesing viewership, umzekeliso uyanda ukubandakanya. abonwabisi bazo zonke iintlobo. Uyenzela ntoni lonto? uyancwina uErick xa uRay emxelela ukuba walile isithembiso sokujonga imidlalo ezayo kuFacebook. Indoda endala iyancuma: Kuba iNetflix ifuna ukuhlala phantsi ngomso.
Isiqhulo esiphezu kwesiqhulo kukuba Intaka ephaphazela phezulu ihanjiswa yiNetflix, yongeza i-Soderbergh kuluhlu lwabenzi befilimu abakwinqanaba lokuqala-ukusuka ku-Alfonso Cuarón ukuya kubazalwana bakaCoen ukuya kuMartin Scorsese-ukuvula umsebenzi omtsha phantsi kwebhanari yedijithali yenkampani. Kudliwanondlebe no I Intatheli yaseHollywood , Umlawuli uchaze ukuba ekuqaleni wayecinga ukusebenzisana neNetflix Abangenangqondo , kunye nokuba ukukhathazeka kwakhe ukuzama ukutyhala ifilimu kwiithiyetha ngenkampani yakhe, iFingerprint Releasing, kwamkhokelela ekubeni aphose kunye nesigebenga sosasazo. Kwakubonakala ngathi, uhlobo lwefilimu oluyiyo, indlela engcono yokwandisa iibhola zamehlo, watsho. Ndivele ndaziva ndingathanda ukuyiwisa kwaye wonke umntu akwazi ukuyibona.
Nabani na oye wabukela imveliso ye-Soderbergh ngononophelo kule minyaka ilishumi idlulileyo okanye uyazi ukuba wenza iifilimu eziphezulu kwiifilimu okwethutyana ngoku. Yintoni enxulumanisa iifilimu ngokwesitayile kunye nokwahluka ngokwahlukileyo Haywire , Imiphumela , Umlingo uMike , Logan Lucky , Awunangqondo, kwaye Intaka ephaphazela phezulu sisiqulatho ekwabelwana ngaso malunga nokuzimela, nokuba sivakaliswa ngokugxekwa kweziko okanye ngamabali abantu abanemigaqo abazingisayo phakathi kokuthotywa kobukhapitali kade. Kwanezona zihloko zorhwebo zithe kratya, i Ulwandle I-trilogy, ezingundoqo, imizekeliso malunga nokudlala inkqubo, kunye nezafobe zokwenza imovie-star-centered moviemaking. Umgca phakathi kweenkwenkwezi zikaDanny Ocean kunye neGeorge Clooney's zincinci njenge-poker chip yeBellagio Casino. Ngelixa kunokuba kungalunganga ukubonisa ubudlelwane buka-Soderbergh kunye neHollywood njengotshaba olungqongqo, ukulinga kwakhe iiprojekthi zamaqonga amaninzi afana ne-interactive mobile-app-murder-mystery. kaMoses , njengokuba iauteurism yodidi lwabathengi ye Abangenangqondo kwaye Intaka ephaphazela phezulu , Zombini ezo zadutyulwa kwii-iPhones, zicebisa umfana onomdla wokufumana isiphelo.
'INtaka ephaphazelayo ephezulu' kunye nokuPhakamisa kwe-iPhone Auteur
Iimuvi zikaSteven Soderbergh, zibekwe kwindawo
Imiba yokuziphendulela ye Intaka ephaphazela phezulu kumnandi ukuhlekisa. Kulula ngokwaneleyo ukubona ikhonkco phakathi kukaRay, umxoxisi we-virtuoso onamava akhe amshiye nge-cynicism engapheliyo malunga nentsimi yakhe ekhethiweyo, kunye no-Soderbergh, naye owaziyo into okanye ezimbini malunga nokuba yi-Rookie yoNyaka. Emuva ngo-1989, wayeyi-wunderkind entsha kwibhloko emva kokukhutshwa kwamanzi, ukutshintshwa komdlalo. Ukwabelana ngesondo, ubuxoki kunye nevidiyo . Sisikhundla esibonakaliswe kumlingiswa ka-Erick, onokuthi abekho enkundleni sele eza kungquzulana nenyani yeligi enomdla kakhulu ekuphuhliseni ubomi obude kwiikontraka zenethiwekhi kunemisebenzi yomntu ngamnye. Ingqondo yeCartesian yokuba iarhente yezemidlalo kunye nenkwenkwezi yakhe imele utshintsho, ibhalansi exhomekeke kwiingqondo kunye nebrawn iqhelekile ukusuka ngaphakathi-isiseko / unyawo / iintsomi zebasketball ezifana UJerry Maguire kwaye Ibhola yemali , zombini Intaka ephaphazela phezulu ivuselela ngokungaphaya ngaphandle kokukopa. Loo mabali ngamaphupha malunga nokubonisa abalinganiswa babo-kunye nabaphulaphuli babo-imali ngelixa bebala uthando lomdlalo. Kwi-Soderbergh's harder-edged, unikezelo oluyinyani oluqinisekileyo lwe-pro sports complex complex, umdlalo awudlalwa kwaye ishishini ngokwalo liba kuphela komchasi wokwenyani.
Kwi Abangenangqondo , Ukusetyenziswa kuka-Soderbergh kumboniso bhanyabhanya wedijithali kwakunencasa ngokumangalisayo, engacebisi kwanto ifana ne-pixelated spin kwi-giallo tropes, zonke ezibukhali, ezigqabhukileyo, izibane ezikhanyayo kunye nee-engile zekhamera ezingakhululekanga. Ugxininiso lwalukububi. Intaka ephaphazela phezulu ithatha iteki eyahluke kancinane, ijonga ubuhle obubonakalayo kodwa ibubuyisele endaweni yayo ngohlobo olupholileyo, lokungakhethi cala, ngokungathi unokuba nombono wethowuni yegumbi ngokwayo. Kukho amaxesha apho u-Soderbergh ehlaziya ngokucacileyo ukuhamba kunye nokukhawuleza kwekhamera yakhe, ethatha i-fly-on-the-wall imibono okanye ekhwele i-limousine, kodwa ngandlela-thile, le yeyona bhanyabhanya yakhe yesitayile kwixesha elide, ekhulula. kude imvakalelo yokuchuma echaziweyo Haywire 's single-thatha izigcawu ukulwa okanye Logan Lucky 's ixesha kunye-isithuba-ukugoba ibali. Endaweni yoko, Intaka ephaphazela phezulu Utyikityo olubonakalayo lunento yokwenza nomgama kunye nokujolisa, rhoqo ukuqulunqa abadlali ngokuchasene neefestile ezinkulu zeofisi ezibonisa ukuba bangqongwe ziindawo ezahlukeneyo zenkampani yaseManhattan-ngaxeshanye embindini wentshukumo nangaphandle bejonge ngaphakathi.
Ingqondo kaSoderbergh yokususa ichasene noko uBarry Jenkins wazisa ekusebenzisaneni kwakhe noMcCraney Ukukhanya kwenyanga , apho amazwi eengoma emifanekiso adityaniswa nokuvakala kwemibongo kwincoko yababini. Cinga ngomdlalo wesithathu wefilimu phakathi kwe-Trevante Rhodes kunye no-André Holland, apho yonke inqumle, i-shot shot, kunye nomculo we-cue uziva umnandi ngumoya othile wothando. Izitayile zikaJenkins kunye noMcCraney zaye zanyanyiswa, ngelixa uSoderbergh esebenzisa ubuhle bakhe njengohlobo lwesikhongozeli, esiqinileyo kwaye esingenamoya, ukugcina incoko yeskripthi kunye neengcinga zicocekile. Kwinqanaba leploti, Intaka ephaphazela phezulu intsonkothile ngobuqhetseba, ibeka uRay kuthotho lweemeko ezibonakala ngathi zinqwenela—kubandakanya ukuphulukana nomsebenzi wakhe wokuba u-arhente ukuba ukuvalwa kutsale ixesha elide-ngelixa esityhala ukuba sijonge ubuchule bakhe bokuhamba. U-Erick unokudlala ephikweni, kodwa uRay luhlobo lomgangatho jikelele. Ngokwemixholo, nangona kunjalo, inzima kwaye igruzukile njengesikrini esetwa yiKarl-Anthony Towns (enye yeengcali ezininzi ezivela kwiincwadi ezichaza ukuqaliswa kwazo kwiligi), enikezela ngohlalutyo lwabasebenzi apho i-NBA-engazange iqanjwe igama. njengoko injalo kwifilimu eyenziwe ngaphandle kwentsebenziswano yayo-ikho ngenxa yobabalo lwabaqeshwa bayo kwaye kungekhona ngenye indlela.
Ixesha, unokuthi, lilungile-okanye ubuncinci lihlawuliswa-kwibali elixhomekeke kwisithembiso (okanye isoyikiso) sabadlali abathatha umdlalo. Phakathi kuka-Anthony Davis ofuna urhwebo, ubukhosi beKlutch obubambe iiPelicans (kunye nabanye be-NBA) ababanjwe, kunye noKristaps Porzingis e-tweeting e-Knicks abalandeli ukuba bahlale bevukile ekuphumeni kwakhe edolophini, abadlali be-superstar babambe amandla angaphezulu-kwigumbi lokutshixa. , inkundla yamatyala, nenkundla yeembono zikawonke-wonke—ngaphezu kunangaphambili. Intaka ephaphazela phezulu ayisiyiyo imbonakalo egqibeleleyo yelo xesha, kuba umdlali wayo obalaseleyo akanayo i-analogue ecacileyo kuMbutho-kwaye udliwano-ndlebe kunye neeDolophu, uDonovan Mitchell, kunye noReggie Jackson bacinga ngaphandle kokucaphukisa-kodwa kuya kufuneka uqikelele. I-National Basketball Players Association iya kuyithanda imuvi ethethelela ixabiso labadlali lokoqobo kunye nokomfuziselo. Ngokumalunga nokuba iinkwenkwezi ze-NBA zingayibona imeko apho zihamba khona kwaye zisasaze iitalente zazo koyena mntu uphakamileyo othengisayo njengoko kusengqiqweni okanye kungenzeki ngomnye umcimbi.
UMcCraney ngumbhali wemidlalo ngokurhweba, kwaye kukho imiba ye Intaka ephaphazela phezulu ebonakala ngathi yeqonga, nangona ikwindlela elungileyo: Yakhiwe njengoluhlu lweedawuti zomlomo, kunye noRay etshintshana amaqabane phakathi kuka-Erick, owayesakuba ngumncedisi wakhe onamabhongo uSam (Zazie Beetz), ummeli wombutho wabadlali uMira (Sonja Sohn, a.k.a. Iintambo ze UDetective Greggs), kunye noSpence (uBill Duke), umqeqeshi wegqala okhankanywe ngasentla othetha ngomdlalo ongaphezulu komdlalo kunye nemisebenzi, nangaphezulu kukaRay, njengesazela sefilimu. Indoda endala ehlakaniphileyo ehlala kwindawo ephakamileyo yokuziphatha yinto encinci, kodwa uMcCraney, owaziyo ukuba azimele nini kwiindibano kunye nexesha lokungazihoyi ngokupheleleyo, ubhale uDuke incoko yababini elingana ne-alley-oop egqibeleleyo-uyabamba. phezulu imigca kunye nomdlali weqonga wabahlaba ekhaya. U-Spence mdala ngokwaneleyo ukuba angakhumbula xa i-Harlem Globetrotters yayingabarhwebi ababhukuqayo kunokuba ibe ngumtsalane wenkampani, kwaye uyalumkela ukuthengiswa kwe-basketball kuyo yonke indawo. Kwangaxeshanye, ujongela phantsi isikweko sobuvila semidlalo yobukhoboka kakhulu kangangokuba nabani na osisebenzisayo kufuneka aphinde amazwi axolisayo.
U-Spence ubekhona, wabona-ukuba ingqondo kunye ne-naivete ka-Erick zipali ezichaseneyo apho uRay anokujikeleza khona, enxibelelana nazo zombini ngelixa ehlala kwindawo yakhe yokuthetha, kunye noHolland-owayesebenza noSoderbergh ngaphambili. I-Knick -uthatha ithuba lobuchule bendima ukuhambisa oko kufanele ukuba kube ngumdlalo ogcweleyo weenkwenkwezi. Nokuba uyancwina, uyasebeza, okanye umamele nje, uyoyikeka, kwaye uzibambele ngokwakhe ngokuchasene noKyle MacLachlan omkhulu, odlala ummangaleli obeka ijethi yabanini ngokuzigwagwisa okusondele (ngozuko) kufutshane neyakhe. Amantombazana emiboniso okhohlakeleyo kunayo nayiphi na indima ezininzi awadlala kuzo Iincopho zamaTwin: UkuBuyisa. Kodwa njengoko uDuke noHolland benjalo, eyona filimu i-X factor-eyona nto ibalaseleyo ebhentshini-nguJeryl Prescott njengonina kaJamero olawula yonke into, nogada umdla wonyana wakhe kwishishini nakwisikhundla sobungcali, exhobisa umama wakhe. ithuku egameni lenzuzo kunye nokhuseleko.
Ayinakulunga ukumosha ezinye iindlela iscript sikaMcCraney esidibanisa imbono yosapho lwenyama kunye negazi kwifilim yentsimbi kunye neglasi, okanye ukuveza kanye ukuba ingakanani ibhola yomnyazi edlalwa kwimuvi apho wonke umlinganiswa ekhona. ubotshelelwe ngendlela enye okanye enye emdlalweni. Kwanele ukuthetha ukuba uSoderbergh noMcCraney bahlakaniphile ngokwaneleyo ukusebenzisa uhlobo lwe-movie-movie kunokuba bavumele ukuba basebenzise. Owona mdlalo ukrelekrele wombhali wesikrini wazisa ipakethe engaqondakaliyo kwindawo yokuqala ethi, nangona ingabalulekanga kwisakhiwo, ijinga phezu kwayo yonke indawo ezayo. NjengeMacGuffin kwifilimu noir, silindele ukubona ukuba yintoni na engaphakathi kwimvulophu yemanilla uRay ayinika uErick kwintlanganiso yabo yokuqala. Kunqabile ngokwaneleyo ukuba ifilimu iphele kwinqaku eliphezulu, kodwa Iintaka ezibhabhayo eziPhezulu umgca wepunch, oza kunye nokuvezwa kwezinto eziqulethweyo, uyinto ehlekisayo kwangoko kwaye inzulu-iqhula ngaphezulu kwesikhalo. Abanye ababukeli banokuphoxeka kukuba imuvi eseti ngexesha lokuvalwa kwe-NBA ichaza kuphela i-LeBron kunye no-Kobe (kunye noSteph kunye no-KD) kunobukho babo, kodwa u-Soderbergh noMcCraney benza ukuba i-marquee yabo ibenye ibalwe nangona iyinto nje e-buzzer- umbethe.
'I-Hangover' kunye noBill Simmons, uChris Ryan, kunye noSean Fennessey
Iinkwenkwezi ze-NHL aziyi kwiiOlimpiki. Kwaye kwabanye, Eli yayilithuba labo lokugqibela.
Ngaba iWarner Bros. Ivuza 'iBatman v Superman' iyelenqe?
Zonke iiMemes kufuneka zife: 'Umdlalo weZihlalo zobukhosi' iMeme Bracket
Umlingo 'weGoldfinch' Ulahlekile kwi-Adaptation
UVavanyo ngokutsha lwe-NBA eLungisiweyo: Kuthekani ukuba uChris Paul wayeye kwiiHawks?
Ngaphandle kokuzonwabisa ngeTyala: Intetho yamantombazana 'Yondla izilwanyana' kwiminyaka eli-10 kamva
Amathuba aPhosiweyo 'e-Romanoffs'
Iingoma Ezingama-60 Ezichaza Ngeminyaka Yee-'90S
'Iingoma ezingama-60 ezichaza ngeminyaka yee-'90s': I-Outkast kunye neFunk yeKamva yeePaki zaseRosa
Isikhokelo sakho sokudlala kwiZigebenga zika-2021: Elona liDala, elona lingafaneliyo, kunye neQela eliGqwesileyo kwiBaseball
'I-Banjo-Kazooie' yaba yiyo njani iBhulorho phakathi kweMarios
Uthando olunolusu: Kutheni Abadlali Ngaphesheya kweNBA Bancipha
Izinto Ezifumanekayo: Iibhiliyoni
'Iibhiliyoni' zexesha lesithathu, Isiqendu 1: Tie Iya kumbaleki
Yeyiphi eyona Recipe yeBisquick igqwesileyo?
Umthetho Oyilwayo Wesimmons Podcast
I-Kawack's Smackdown, uLuka oLandelayo, kunye neTrales Torch Philly noRyen Russillo
Imbeko kwiibhatyi ezininzi zikaKevin Costner 'zeYellowstone'
Uyenza njani uBob Woodward? Ukongeza: iPolitico kunye neRekhodi.
I-Alec Baldwin's 'Glengarry Glen Ross' Monologue Igqibelele- Kodwa ngaba ichanekile?
Abaphumeleleyo nabangaPhuliyo kuMjikelo weCandelo leNFL
UPat McAfee, uChris Wallace, iNtsomi yokuBhala kwezeMidlalo yaseTexas, kunye nokunye
Ukuhlaziywa Konyaka Ka-2020
Uvavanyo luka-El Chapo
I-Basketball ye-Risk-Management yaseHouston ayizange isebenze ngokuchasene namaQhawe
Ularry Wilmore: Mnyama Emoyeni
Ukoyiswa kukaZakaria 'kwizifundo ezilishumi zelizwe elisemva kwesifo'
'Mr. IRobhothi 'Ekugqibeleni ibonisa isandla sayo
‘Abagcini beGlass Vol. 2 ’Phuma kuPhando
'ILobster' ngoyena uMgqatswa weScreenplay wasekuqaleni oMnandi
Ukuchaza uBusuku bokuSeta iRekhodi yeGrizzlies, into omawuyenze ePortland, kunye noTshintsho lweNkqubo yokucinga yeDPOY
UD'Angelo Russell Uyanda
Ukuphinda Usebenze Kwakhona
'Umqhubi weteksi' Ndikunye noBill Simmons, uBill Hader, kunye noSean Fennessey
I-NFL iDlulisa ukuThatha iSimo kuDeshaun Watson
Ukukhuselwa kweLwandlehawks ekugqibeleni kwabonisa xa kuXinene kakhulu
Umthetho Oyilwayo We-Simmons Podcast
UBill Simmons wenza udliwanondlebe noPeyton Manning
Sifuna ukuba ngcono kuneAtlanta
IBrooklyn iliGuqule ixesha eliRhoqo laba liLebhu yayo
Ukufumana uKhuphiswano olukhulu olulandelayo lweNFL
Dammit, ii-Astros Ngaba ngenene ziya kwenza le nto, akunjalo?
Ezemidlalo, Inkcubeko Ye-Pop Kunye Netekhnoloji.
uEsther upapa omncinci
yintoni isiqendu sebhotile
20180 nfl uyilo oluhlekisayo
Ilanga lomngxunya omnyama ngu-soundgarden
Iingoma ziyahlukana nengoma
patrick williams nba uyilo
Copyright © Onke Amalungelo Agciniwe | vao.co.at